अभिनेत्री श्रद्धा कपुरले नेपाली यु्वक रोहन श्रेष्ठसँग बिहे गर्ने हल्ला सुनेपछि, बुबा शक्त्ति कपुरले दिए यस्तो जवाफ ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/अभिनेत्री श्रद्धा कपुरले नेपाली यु्वक रोहन श्रेष्ठसँग बिहे गर्ने हल्ला सुनेपछि, बुबा शक्त्ति कपुरले दिए यस्तो जवाफ !
उनले भने, “श्रद्धाको बिहे गर्ने उमेर भएको छैन । उनी अझै बालाखा नै छिन् । उनले जिबनमा धेरै गर्न र धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ ।” बुधबार मात्र बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा र नेपाली व्याइफेन्ड रोहन श्रेष्ठ बाइकमा हिडिरहेको भिडियो भाइरल भएको थियो ।लकडाउन खुकुलो भएसँगै बलिउडमा सुटिङ सुरु हुने चर्चा सुनिन थालेको छ । भारतीय अनलाईन पिंकभिल्लाले यस्को बारेमा शक्त्ति कपुरसँग बुझ्न खोजेको थिए । यही सन्दर्भमा उनले कोरोना पुर्णरुपमा निर्मुल नभएसम्म छोरीलाई सुटिङमा नपठाउने पनि बताएका छन् ।
महराले घर पुगेपछि निकाले जनताको नाममा लिखित सन्देश